ကွယ်လွန်သူ မင်းသွေးကို ရည်စူး၍ ပါရမီတောရ ဆရာတော် အရှင်ဆန္ဒာဓိက(သာသနာဓဇ ဓမ္မာစရိယ)၏ 'သံဝေဂ နှလ?? - Yangon Media Group
ကွယ်လွန်သူ မင်းသွေးကို ရည်စူး၍ ပါရမီတောရ ဆရာတော် အရှင်ဆန္ဒာဓိက(သာသနာဓဇ ဓမ္မာစရိယ)၏ ‘သံဝေဂ နှလ??
ကွယ်လွန်သူ သရုပ်ဆောင် မင်းသွေးကို ရည်စူးကာ ကုသိုလ်ပြုကျင်းပသည့်အနေဖြင့် ရွှေပါ ရမီတောရ ဆရာတော်အရှင်ဆန္ဒာဓိက (သာသနာဓဇဓမ္မာစရိယ)၏ ‘သံဝေဂနှလုံးသားဓမ္မသဘင်’တရားပွဲ ကျင်းပမည်ဖြစ် ကြောင်း သိရသည်။ အဆိုပါ တရားဓမ္မသဘင်ကို အောက်တိုဘာ ၂၄ ရက်တွင် တာမွေမြို့နယ်ရှိ ရွှေထွဋ်တင်ကွင်း၌ ည ၇နာရီခွဲမှ စတင်ကာ ပြုလုပ်မည်ဖြစ်ပြီး မည်သူမဆို လာရောက်တရားနာယူနိုင်ကြောင်း သိရသည်။
”မင်းသွေးအတွက် ရည်စူးကုသိုလ်ပြုလုပ်တဲ့အနေနဲ့ ပြုလုပ်တဲ့တရားပွဲလေးပါ။ မင်းသွေးအတွက် ကျွန်တော်တို့ဘက်ကနေပြီး တော့ အကောင်းဆုံးလုပ်ပေးနိုင်တာလေးတွေကို ပြုလုပ်ပေးတဲ့ သဘောပါ။ သူ ကောင်းရာသုဂတိဘုံဘဝကို ရောက်စေချင်တဲ့ အတွက် တတ်နိုင်သလောက်လေးလုပ်ပေးဖြစ်နေတာပါ။ တရားပွဲကို ဘယ်သူမဆိုလာပြီးတော့ တရားနာယူနိုင်ပါတယ်”ဟု Myanmar Media7မှဥက္ကဋ္ဌ ကိုဝေမင်းမောင်က ပြောသည်။7SENSE Film Production ၊ အကယ်ဒမီနေတိုးနှင့် မုန်းစွဲရုပ်ရှင်အဖွဲ့သားများမှ ကွယ်လွန်သူသရုပ်ဆောင် မင်းသွေးကို ရည်စူးကုသိုလ်ပြုလုပ်ကျင်းပခြင်းဖြစ်သည်။
တရားပွဲသို့လာရောက် တရားမနာယူနိုင်သော မြန်မာနိုင်ငံတစ်ဝန်းမှပရိသတ်များ တရားနာယူနိုင်ရန်အတွက် Shwe FM နှင့် Channel9တို့တွင် တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်ပြသသွားမည်ဖြစ် ကြောင်းသိရသည်။ အောက်တိုဘာ ၃ ရက်တွင် ကွယ်လွန်သွားသောရုပ်ရှင်နှင့် ဗီဒီယိုသရုပ်ဆောင် မင်းသွေးအတွက်ရည်စူးကာ အနုပညာရှင်များ၊ ပရိသတ်များအပါအဝင် မိသားစုများမှလည်း ကုသိုလ်ကောင်းမှုများကို ဆက်တိုက်ပြုလုပ်ပေးလျက်ရှိပြီး လက်ရှိတွင်လည်း ကွယ်လွန်သူ သရုပ်ဆောင်မင်းသွေးအတွက် ရည်စူးကာ အစ်ကိုဖြစ်သူ သရုပ်ဆောင်နေတိုးမှလည်း သာသနာ့ဘောင်သို့ ဝင်ရောက်ကာ ကုသိုလ်ကောင်းမှုများပြုလုပ်ပေးလျက်ရှိနေကြောင်း သိရသည်။